Storelọ ahịa Apple dị na Charleston, South Carolina, na-emechi n'ihi COVID-19 | Esi m na mac
Apple ekwuputala imechi ụlọ ahịa Apple dị na Charleston, South Carolina, mmechi kpatara mgbe ọ chọpụtasịrị nke ahụ ihe karịrị ndị ọrụ 20 ekpughere na COVID-19 na ụfọdụ anwalela nke ọma, dị ka ha si kwuo na Bloomberg. Weebụsaịtị Apple nke ụlọ ahịa a na -egosi ka ọ ga -esi mechie ruo Mọnde, Ọgọst 23.
Na -echekwa nha Charleston na -enwekarị n'etiti ndị ọrụ 70 na 80, yabụ ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na -arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ ugbu a n'ihi ikpughe na ọrịa na COVID, a ghọtara na Apple amalitela imechi ụlọ ahịa ahụ.
Kpọọ ndị ọrụ ọzọ iji mejupụta oghere ndị ọrụ, O yighị ka ọ bụ nhọrọ ebe ọ bụ n'ihi coronavirus, ọ na -esiri ike ịchọta ndị ọrụ na -achọ ịrụ ọrụ maka ọha, ọ bụghị naanị na Charleston, kamakwa n'obodo ndị ọzọ na United States. Mgbanwe ọhụrụ Delta na -agbasa ngwa ngwa nke coronavirus abụghị enyemaka.
N'ezie, n'ihi ụdị a, Apple ekpebiela kagbuo atụmatụ gị ịnyeghachi ihe taa na nnọkọ Apple n'onwe ya na August 30. N'ọnwa June gara aga, Apple kpebiri ịkwụsị ịchọ ka ndị ọrụ na ndị ahịa na -eyi nkpuchi n'ụlọ ahịa. Na ngwụsị ọnwa Julaị, mgbe Delta dị iche iche malitere ịgbasa, Apple kpebiri iweghachi ihe eji eme nkpuchi.
Ọ bụrụ na ụdị Delta na -aga n'ihu na -agbasa, ọ ga -abụ na Apple ga -arụnye usoro mgbochi ndị ọzọ na Storelọ Ahịa Apple, iji belata ikike ma gbochie ụlọ ahịa ka ha ghara ịbụ ebe mgbasa nke coronavirus.
Dabere na akụkọ Bloomberg, ụlọ ahịa na -ere ahịa Apple na US. ha ebelatala oge ọrụ ha, akụkụ n'ihi COVID kamakwa n'ihi ịdị warara nke ahịa ọrụ, n'agbanyeghị na ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Apple niile Apple kesara na United States ka ghe oghe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Storelọ ahịa Apple dị na Charleston, South Carolina, na-emechi n'ihi COVID-19
Tim Robbins na -esonye na nkedo nke mmegharị usoro "ajị" na Apple TV +
A na -ahụ iMac M1 nke agbakwunyere na mbụ na Storelọ Ahịa Apple